Tilmaamaha mesh-ka-wareegga ee qurxinta
MAYA Tixraaca Mesh Qalab Dhumucdiisuna waxay x ballaca Dhexroor usha la goostay Garoomada wareega Garoomada usha laga gudbay Miisaanka
1 SK-2001 Birta aan la taaban karin 201,304,316, 316L iyo wixii la mid ah; Bir kaarboon yar 1.0mm x 1.6mm 1.5mm 8mm 12mm 6.0 KG/m²
Ujeedada mesh wareeg ah oo qurxinta
1. Shabag bir ah oo la isku qurxiyo oo lagu qurxiyo biraha.
2. Waxaa loo isticmaalaa dayactirka mesh bir ah oo la isku qurxiyo oo la isku qurxiyo.
3. Mesh bir ah oo la isku qurxiyo oo loogu talagalay xayndaabka.
4. Shabag-dhogorta qurxinta ee alaabta guriga.
5. Mesh-qurxinta oo la isku qurxiyo oo loogu talagalay dhismaha wejiga.
6. Mesh-ka-qurxinta ee saqafka.
7. Shabag-xidhka-qurxinta ee mesh ilaalinta xayawaanka.
8. Shaashadda wax lagu qurxiyo ee la isku qurxiyo ee kala-soocidda booska gudaha iyo bandhigidda.
Hore: Mesh giraanta birta ah ee qurxinta ee gaashaanka silsiladda ilaalinta badbaadada
Xiga: Shaashada shaandhada birta ah ee birta aan-la-hayn 304/316
Tilmaamida saxan aluminium dalool ah Dhumucdiisuna waxay tahay saxan aluminium dalool ah ee gidaarka daahku waa 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm iyo 4.0mm. Cabbirka caadiga ah ee saxan aluminium dalool ah waa 1000 * 20001200 * 2400, kaas oo sidoo kale la habeyn karo. Qiimaha cutubka gaarka ah ee saxan aluminium dalool ah ayaa loo baahan yahay in la go'aamiyo iyadoo loo eegayo dhumucda saxan aluminium dalool ah iyo dhibka habaynta. Guud ahaan, oraahda waxaa la sameeyaa ka dib markii macaamiisha pr...